Iimagazini - Geofumadas
UKadaster no-KU Leuven bazakusebenzisana kuphuhliso lwe-INDE eSaint Lucia Nokuba sele kwenziwe iinzame ezininzi, kwicandelo likarhulumente, ukusetyenziswa ngokubanzi / ngobulumko kolwazi lwe-geospatial kulawulo lwemihla ngemihla, imigaqo-nkqubo yoluntu kunye neenkqubo zokwenza izigqibo iye yahlala isikelwe umda. Kumzamo wokunceda ...
Bentley Systems Hexagon kadaster Magazines Microsoft Topcon Ukuqhawula
GPS / Izixhobo, ezintsha, Topography
Inkonzo yeWebhu yamaphupha amadala phakathi kweyona ndawo ebalaseleyo yeMephu ye-Map 28-124
Kupapasho lwayo lwakutsha nje, ivolumu 28 -kwinyanga kaMatshi nango-Epreli 2019-, Imagazini yeMap ibeke umxholo wayo ophambili, yonke into enxulumene neNkomfa ye-IX ye-Ieriya kwiZiseko zoLwazi lweDatha. Kukhetho lwamanqaku asixhenxe enzululwazi, apapashwe kulo lindixesha obalulekileyo kwicandelo lezenzululwazi, ...
Nge-Epreli 2, 2019, eAmsterdam: I-Global Geospatial Forum (GWF) 2019, owona msitho ulindelweyo kuluntu lwe-geospatial, luqale izolo eTaets Art & Event Park eAmsterdam-ZNSTD. Umnyhadala uqale ngaphezulu kwe-1,000 yabathunywa abavela kumazwe angama-75 beza kunye ngenjongo yokutshintshiselana ngolwazi malunga nokuba iya kuba ...
Iimagazini zeGeomatics - Phezulu kwe-40 ukuya kwiminyaka emi-5 kamva
Kwi-2013 sahlula amaphephancwadi anikezelwe kwicandelo le-geomatics, besebenzisa i-Alexa yabo njengobungqina. Kwiminyaka emi-5 kamva senze uhlaziyo. Njengoko besesitshilo ngaphambili, iimagazini ze-geomatics ziye zatshintsha ngokuthe ngcembe ngesingqi sesayensi inkcazo yayo exhomekeke kakhulu kubuchwephesha ...
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 26: I-Geospatial Media kunye noNxibelelwano babhengeze abaphumeleleyo ngembasa ye-Geospatial World Leadership 2019, ejonge ukuvuyisana neenkokheli zeshishini le-geospatial eziye zazisa izinto ezintsha kwindawo yokusebenza kunye nefuthe elibonakalayo kwintengiso esele ikho. . Abonyulwa babekhethwe liqela labachopheli-tyala ...
Ngo-Epreli 2, 3 no-4 walo nyaka, izigebenga eziphambili kubuchwephesha be-geospatial ziya kudibana eAmsterdam. Sibhekisa kumnyhadala wehlabathi owenzeka kwiintsuku ezi-3, nobubanjelwe kule minyaka idlulileyo, ibizwa ngokuba yiGeospatial World Forum 2019, iqonga lokudibana apho iinkokheli ebaleni ...
I-Twitter ilapha ukuhlala, ngakumbi ukuxhomekeka okukhulayo kwi-Intanethi ngabasebenzisi ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla. Kuqikelelwa ukuba ngo-2020 iipesenti ezingama-80 zabasebenzisi ziya kuqhagamshela kwi-Intanethi kwizixhobo eziphathwayo. Nokuba yeyiphi na intsimi yakho, ukuba ungumphandi, umcebisi, umbonisi, usomashishini okanye ozimeleyo, ngenye imini ungazisola ...
Ndilufumene ushicilelo lwale kota yokuqala ka-2015, nomxholo oxabisekileyo ngolwimi lwaseSpain.Izihloko zizodwa zixelela ixabiso elimele abo basebenzisana nabo: Kuvela ixesha elitsha kulawulo lomhlaba. Eli linqaku elihle apho uChrit Lemmen nabanye abathathu asebenza nabo bathetha ngathi ...
Kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo senze uphononongo lweeakhawunti eziphantse zibe ngamashumi amane ze-twitter, kuluhlu esilubiza ngokuba yiTop40. Namhlanje sihlaziya olu luhlu, ukubona ukuba kwenzeke ntoni phakathi kukaMeyi 22 kunye nokuphela kukaDisemba 22, 2014. Kuzo zonke, ezili-11 zingesiNgesi, zimbini ngesiPhuthukezi nakwezinye ...
I-Twitter iye yathatha indawo enkulu yezi zinto zilandelayo ebesizenza ngokusebenzisa ukutya kwendabuko. Akuthandabuzeki ukuba kutheni le nto yenzekile, kodwa mhlawumbi esinye sezizathu kukusebenza kakuhle kweendaba ezivela kwiifowuni eziphathwayo kunye nethuba lokucoca kuluhlu olushiya umxholo ongengowomdla wethu. Kwi…
GIM International. uhlelo lokuqala in Spanish
Geomatics regista jikelele, GIM International iqala uhlelo yayo yokuqala iSpanish, siza kuza izihlandlo ezithathu ngomnyaka.
Social Maps Urban, kupapasho umdla
Kanye xa sikwixesha apho umda wobambiswano lwentuthuko yezizwe ngezizwe kunye neenzame zelizwe ngalinye zokucwangcisa isicwangciso salo ngenjongo yokuphucula umgangatho wobomi babemi uya ungathandabuzeki, ushicilelo lwesibini luyafika, olubandakanya I-CD yezicelo zokupapashwa kweeMaphu ...
Olu hlelo lwamva nje lweNational Geographic luzisa izihloko ezibini ezinomdla omkhulu: Kwelinye icala, ingxelo ebanzi ngenkqubo yokwenza imodeli yelifa lemveli kusetyenziswa iinkqubo zokubamba i-laser. Le yinto yomqokeleli, echaza ubunzima bomsebenzi ebusweni beNtaba iRushmore eMzantsi Dakota ...
IiMagazini zeGeomatics-Eyona ndawo iphambili kuma-40
Iimagazini zeGeomatics ziye zavela ngokuthe ngcembe ngesingqi sesayensi, inkcazo yayo ixhomekeke kakhulu kubuchwephesha be-teknoloji kunye nokuhlanganiswa kweengqeqesho ezijikeleze isayensi yomhlaba. Imikhwa yangoku ibulale iimagazini ezimiweyo ezimi ixesha elide, iphinde yahlaziya umxholo ophambili wezinye iimpapasho kwaye ivaliwe ...
Ukufundisa i-CAD / GIS, Okufumaneka, Geospatial - GIS
MundoGEO # Qhagamshela ubhengeza abagqwesileyo bokugqibela kumabhaso e-2013
MundoGEO # Qhagamshela ubhengeze ukuvulwa kwenqanaba lesibini lebhaso elihlonipha elona shishini lilungileyo le-geospatial ukuze ukwazi ukuvota omnye wabagqibeleleyo abahlanu kudidi ngalunye. Ngexesha lenyanga ka-Epreli, uluntu luye lwabonisa ngokuphandle ukuba ngoobani ekufuneka bafikelele kumjikelo wokugqibela kwicandelo ngalinye. Ngoku, abahlanu bavote kakhulu ...